MURUGO: Kabtanka Koox Ingiriis Ah Oo Si Xun U Geeriyooday Maanta Isagoo 32 Jir Ah Iyo Murugada Taalla UK - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMURUGO: Kabtanka Koox Ingiriis Ah Oo Si Xun U Geeriyooday Maanta Isagoo 32 Jir Ah Iyo Murugada Taalla UK
MURUGO: Kabtanka Koox Ingiriis Ah Oo Si Xun U Geeriyooday Maanta Isagoo 32 Jir Ah Iyo Murugada Taalla UK
April 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 1
Kubadda cagta Ingiriiska ayay murugo kusoo korodhay maanta kaddib markii ay soo baxday geerida mid ka mid ah kabtannada kooxaha dalkaas ka dhisan.
Lee Collins oo ay da’diisu ahayd 32 jir, horena ugu soo ciyaaray kooxaha Wolverhampton Wanderers, waqtiyo kalena kusoo qaatay Port Vale, Barnsley, Northampton Town, Mansfield Town iyo Forest Green Rovers, haddana ahaa kabtanka kooxda Yeovil Town oo uu ku biiray sannadkii 2019 ayaa geeriyooday.
Laacibkan dhintay ayaa ciyaartii ugu dambaysay ee uu kooxdiisa u saftay ay ahayd February 6, waxaanay kooxdiisu si rasmi ah u xaqiijisay in shalay uu geeriyooday.
Yeovil Town daboolka kamay qaadin sababta keentay dhimashada kabtankeeda oo la filayay in uu ciyaaro kulanka Jimcaha ee Altrincham oo ay ka wada tirsan yihiin National League oo ah horyaallada heerarka hoose ee Ingiriiska.
Ciyaartan ayaa dib loo dhigay maadaama ay murugaysan yihiin ciyaartoyda uu kabtankoodu geeriyooday ee Yeovil Town.
War-saxaafadeed ay maanta soo saartay Yeovil Town ayay ku sheegtay in ay la murugaysan tahay dhimashada kabtankeedii, waxayse xustay in geeridani dhacdayy maalintii shalay ee Arbacadii.
“Dhamaan kooxda Yeovil Town waxay u barooranaysaa geerida kabtankii kooxda Lee Collins.” Ayay kooxdu ku tidhi war-saxaafadeedka, iyadoo intaa raacisay: “Lee wuxuu u geeriyooday si xun maalintii shalay, waxaananu murugada la qaybsanaynaa qoyska iyo saaxiibbadiisii.
“Qof walba waxaanu ka dalbanaynaa in uu ixtiraamo oo uu dhawro xuquuqda gaarka ah ee qoyska waqtigan.”
Cabdala salax says:
Waa baqtiyay dheh